Kulan loo qabtay Jaamacadaha Puntland oo Xalay ku soo gaba gaboobay Bosaso+Sawiro – SBC
Kulan loo qabtay Jaamacadaha Puntland oo Xalay ku soo gaba gaboobay Bosaso+Sawiro
Kulan lagu soo xirayay Tababar ay jaamacada Boosaaso ay u qabatay Ardayda 7 jaamacadood oo ku yaala deegaanada Puntland ayaa caawa ka dhacay gudaha Magaalada Boosaaso.
Xaflada Tababarkani lagu soo xirayay ayaa waxaa ka soo qeyb galay oo goob joog ahaa madaxda jaamacadaha ardaydoodu ay ka qeyb qaadanayeen Tababarkaan, Ardaydii tababarka Qaadaneysay iyo weliba Dhinacyada Culimada iyo maamulka oo uu ka joogay gudoomiye ku xigeenka waxbarashada gobolka.
Waxaa halkaasi hadalo qiimo badan ka soo kala jeediyay Maamule yaasha todobada Jaamacadood ee ka qeyb qaatay tababarkani waxaana ugu horeyn faah faahin ka bixiyay Tababarkan iyo weliba waxa looga golleeyahay C/laahi yuusuf Cali oo ka mid ah Macalimiintii bixineysay tabarka, isagoona sheegay in ujeedada kulankani uu ahaa Dhiira gelinta Ardayda jaamacadaha Puntland, uuna maalgelintiisu leeyahay ururka Dhalinyarada Caalamka Islaamka .
Waxaa uu kulankan Ardaya jaamacadaha Puntland lagu tababaray soconayay mudo ku siman 4 Maalin, islamarkaana ay fulintiisu laheyd Jaamacada Boosaaso.
Waxa sidoo kale halkaasi hadalo ka soo jeediyay Madaxda jaamacadaha Puntland oo ay kala ahaayeen, Jaamacada Boosaaso oo kulankan soo qaban qaabisay, Jaamacada Muqdisho, Jaamacada Bariga Soomaaliya, jaamacada Bariga Africa, Jaamacada JITG, BIDAM iyo weliba Macadka Caafimaadka.
Hadii aynu soo qaadano waxaa ka Mid ahaa Madaxdii jaamacadaha ee halakasi ka hadlay gudoomiyaha Jaamacada Muqdisho Aadan Xerow waxaana uu halkaasi ka sheegay in kulankani uu yahay mid Faaiido weyn u leh Ardayda jaamacadaha Puntland.
Sidoo kale waxa uu ku booriyay Jaamacadaha in la badiyo kulamada ceynkan oo kale ah, dhanka Ardayda qaadatay Tababarkana ku weydiiyay Qaab sarbeeb ah waxyaabaha iska bedelay Aqoontooda ka dib kulankan.
Maxamed Cali Faarax Gudoomiyaha jaamacada Boosaaso ayaa isna halkaasi ka jeediyay Hadal khiimobadan, isagoo ugu horeyntii u mahad celiyay Jaamacadaha ka soo qeyb galay kulankan , weliba Aqoonyahanadii casharada ka bixineysay iyo weliba Ardaydii qaadatay kulanka.
Waxaa sidoo kale uu ku dheeraaday Qiimaha Barnaamijkan islamarkaana sheegay in uu yahay Barnaamijkan mid faa iido u leh Ardaryda Jaamacdadaha loona baahan yahay in Ardayda Baratay in ay gaarsiiyaan Ardayda kale.
Qaar ka mid ah Ardayda ka kala socotay Jaamacadaha ayaa iyana halkaasi ka jeediyay hadalo ay ku cabirayeen faa iidooyinka ay ka heleen kulanka, waxaana ka mid ahaa Ardaydaasi Cabdi wali Xasan Cabdi oo isago ka socday Jaamacadaha Bariga Soomaaliya ee Magaalada Qardho.
Waxa uu Cabdi wali u mahad celiyay Ururka ka qeyb qaadanaya Maalgelinta kulankan iyo Jaamacadaha Boosaaso oo fulineysay.
Waxaa halke oo uu kulanka ugu Mahad celiyay Siyaasi Cali Cabdi Awaare oo ka mid ah siyaasiyiinta Puntland oo uu sheegay in uu ka qeyb qaatay Dhiiri gelinta Ardayda guud ahaan gaar ahaan Ardayda jaamacada Bariga Soomaliya.
Waxa ugu dambentii Xaflada Soo xiray Gudoomiye ku xigeenka Waxbarashada gobolka Bari, Muuse jibriil waxaana isagoo ku hadlayay Magaca Wasaarada waxbarashada puntland mahad balaaran u jeediyay cidii soo qaban qaabisay kulanka iyo jaamacadaha ka qeyb galay.
Sikastaba ha ahaatee kulankan ayaa ku soo gaba gaboobay si wanaagsan waxaana halkaasi gaba gabadii lagu gudoonsiiyay qaar ka mid ah Ardayda Shahaadooyin.
khaalid cadde says:
Diseenbar 1, 2011 at 11:46 am